Maitiro ekudzima Twitter Fleets | IPhone nhau
Vhiki rapfuura uye pasina nhau dzakapfuura kana runyerekupe, iyo pasocial network Twitter yakaratidza maFleets, sarudzo nyowani iyo Twitter inoita kuti iwanikwe kwatiri kuti titaure nyaya, ephemeral nyaya dzinotora maawa makumi maviri nemana, mushure maizvozvo vanobviswa otomatiki.
Vagadziri venyaya idzi vanoziva nguva dzese idzo vashandisi vakawana nyaya dzavo, kungave nekuda kwekuda kuziva kana kana vakawana imwe nzira yekuzvidzivirira. Nehurombo, semamwe mapuratifomu akashandisa nzira iyi yekutaura nyaya, Hatigone kuvamisa asi tinogona kuvanyararidza.
Kunge Twitter basa ratinoita isu inobvumidza kunyararidza iwo maakaundi atinotevera (kazhinji nekuzvipira) asi isu hatifarire chero chinhu chavanogona kutsikisa, Twitter inotibvumidzawo kunyararidza maFleets akaburitswa nechero maakaunzi atinoteedzera tichiri kunyararidza account.
1 Bvisa Twitter Fleets
Bvisa Twitter Fleets
Iyo inokurumidza nzira yekudarika iyo kuratidza ndeyekutsikirira uye Dhinda uye ubatisise iyo icon icon kubva kuaccount.
Tevere, tinya pane Mute @ account zita.
Pakupedzisira, iyo sarudzo inotibvumidza isu mbeveve chete maFleets pane iyo account.
Kana iwe uchida kuona maFleets akaburitswa nemaakaundi aunoteedzera usati wavanyaradza, kuti uvanyaradze tinya pane chimwe chazvo.
Tevere, tinya pane iyo museve unoratidzwa kurudyi rwechipositi uye kuruboshwe kweX inotibvumidza kuvhara nyaya.
Wobva wadzvanya pa Mute @ account zita uye pakupedzisira pa Nyarara Fleets.
Nehurombo, kana vashandisi vatinoteedzera vajaira idzi nyaya, isu tinofanirwa ita chiitiko chimwe nechimwe. Ndinovimba, vangangodaro vaneta nekuvashandisa izvozvi uye iwe unongoteedzera maakaundi ayo achiri kufarira iyi nyowani Twitter post fomati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekudzima Twitter Fleets
Kuedza Eufy 2K Pan uye Tilt, kamera yakanakisa pamutengo mukuru